Orinasa IT - Easy Multi Display - signage niomerika
Orinasa IT matoky Easy Multi Display
"Izahay dia nitady rindrambaiko Digital Signage mahomby ho an'ny mpanjifanay!"
Netkom informatique dia orinasa informatika iray. Ity orinasa ity dia niasa nandritra ny 18 taona mahery ary miara-miasa amin'ny mpanjifa maro toy ny isam-batan'olona, ​​SME, VSE na efitranon'ny tanàna ary mikarakara ny karazana fametrahana rehetra!
Ao amin'ny 2021, Netkom Informatique dia hametraka Easy Multi Display amin'ny iray amin'ireo mpanjifany!
Tranokalan'ny Netkom Informatique
Ny mpanjifany dia te-ho afaka mampiseho votoaty tsotra izao amin'ny efijery malalany ary afaka manova azy haingana be rehefa mandeha ny andro. Ka natolotray ny Easy Multi Display izay afaka nanao izay rehetra tian'ny mpanjifa!
Ny mpanjifa Netkom Informatique dia afaka mampiseho izay tadiaviny rehefa tiany ary afaka manova ny seho misy azy amin'ny tsindry tsotra ihany koa!
Ny fikirakirana nakan'i Netkom Informatique dia kinova "iray efijery" an'ny rindrambaiko Easy Multi Display ary koa solosaina mini ary efijery iray ho an'ny vola mitentina 500 euro.
Hatsarao ny traikefan'ny mpanjifanao
Atolory ny mpanjifanao irery ihany ny tsara indrindra ary safidio Easy Multi Display ho toy ny rindrambaiko famantarana nomerika!